Addisuu Araggaa waajjira giddu galeessaa ODPtti hogganaan ijaarsa fi siyaasa baadiyyaa obbo Addisuu Araggaa – Kichuu
HomeAfaan OromooRadioAddisuu Araggaa waajjira giddu galeessaa ODPtti hogganaan ijaarsa fi siyaasa baadiyyaa obbo Addisuu Araggaa
Addisuu Araggaa waajjira giddu galeessaa ODPtti hogganaan ijaarsa fi siyaasa baadiyyaa obbo Addisuu Araggaa
Qophiin keenya Kamisaa kunooti
Addisuu Araggaa: ”ABO’n waraana bifa haaraan leenjisaa jira”
(bbc)–ABO’n karaa nagaa qabsaa’uuf erga biyya galees godinaalee garagaraa keessatti ammoo bifa haaraan loltoota leenjisaa jira jedhan waajjira giddu galeessaa ODPtti hogganaan ijaarsa fi siyaasa baadiyyaa Obbo Addisuu Araggaa.
Mootummaa fi ABO’n Asmaraatti karaa nagaa qabsaa’uuf waliigalanis uummanni dhimmi waliigaltee isaanii ifatti beekamuu qaba jechuun gaafataa tureera.
Kana ilaalchisees Obbo Addisuu Araggaa har’a ibsa kennaniin dhimmi waliigaltee mootummaan ABO waliin taasise dhokfameera kan jedhu odeeffannoo sirrii miti jedhanii akkataa walii galleen ariitiidhaan nuuf deemaa hin jiru jedhan.
Mootummaa fi ABO’n waraana ilaachisee;
Waraanni Eertiraa ture erga biyya galee warri biyya keessa socho’aa turan guyyota 15 keessatti itti makamanii waliin leenjii eegalu kan jedhu waliigalle jedhu Obbo Addisuun
Ta’us guyyoota 15 eegnee waan dhufuu hin dandeenyeef warra Eertiraadhaa galan leenjii galchine jedhan.
”Waraanni kun nuufis humna gaachana” jedhan.
Waraana biyya kessa jiru ilaalchisee koreen hundaa’ee kan hojjechaa ture yoo tahu gama mootummaan kutannoodhaan qophiin barbaachisu hundi xumurameera jedhan Obbo Addisuun.
Gama ABOdhaan garuu waraana isaanii leenjii galchuu ilaalchisee yeroo waliin mari’annu karuma nagaa walii gallus qabatamaan lafarratti garuu xumuruu hin dandeenye jedhan.
Akka jaarmiyaa siyaasichaatti hoggansi hundi waliin mari’atee karaa nagaa qabsaa’uuf waligaluun isaanii nu shakkisiisa kan jedhan Obbo Addisuun ibsi hoogansa siyaasaa ABO fi ajajaa waraana Lixaan kennamu garagara jedhan.
”Godinoota akka Gujii, Qeellam, Wallagga Lixaa, Wallagga Bahaa fi Iluu Abbaa Booraa keessatti waraana haaraa filachuun leenjisaa jiru, kun ammoo nu yaaddessa,” jedhan Obbo Addisuu Araggaa.
Dabalataan seer-maleessumaan babal’ataa akka jiru himanii hoggantootni keenyallee ajjefamaa jiru jedhe.
‘Beekumsaafi dandeettii qofaan osoo hin taane lubbuu kennuuf duubatti hin deebinu’
Seenaa m/b Medikaalaa Yunvarsiitii Finfinneetti qabxii ol-aanaa galmaa’e
Gama biraatin dubbii dhaabbilee lamaan gidduu jiru furuuf koreen waloo dhaabbate karoora waliiniitin akka hojjetuf tattaaffiin godhamaa turus hanga ammaatti wanti milkaa’e akka hin jirre Obbo Addisuu Araggaa himan. Jaarsoliin biyyaa dhimmicha akka furaniif gama ODPtin tattaaffiin godhamaa akka tures dubbatan.Dhaabbileen qabsoo hidhannoorra turan seera fi heera biyyattii kabajanii akka socho’an kan jedhu dhimma dhaabbilee siyaasaa qabsoo hidhannoora turan walin irratti waliigalame dha jedhu.
Morkii caalaa wal tumsuu fi wal deeggaruun yaa hojjennu kan jedhus qaama marii dhaabbilee siyaasaa walin taasifamee ta’uusaa dubbatan.
ABO’n ammoo waliigalticha raawwachuuf mootummaatu harkifataa jira jechuun komataa tureera.
Jiraattotni magaala Naqamtee fi Shaambuu yaaddoo nageenyaa guddaa keessa jiraachuu BBCtti himan
Har’a magaalaa Naqamtee kessatti haleellaa raayyaan ittisa biyyaa raawwateen lubbuun nama tokkoo yoo darbu dargaggeessi tokko ammoo miidhamee hospitaala galuu jiraattonni BBC’tti himaniiru.
”Konkolaataa irraa utaalanii bu’uun bitaa fi mirga ilaalanii hoteelotatti ol seenanii rasaasa dhukaasan. Mucaan diimaan tokko yerosuma du’e.
Tokko ammoo miila rukutanii madaa’e. Isaan achumatti dhiisanii sokkani.
Sanaan booda ijoolleen naannicha jirtu namticha isa du’e FSR irra kaa’anii isa madaa’e ammoo motora irra kaa’anii gara hospitaalaatti fudhatanii sokkuu isaanii ijakoonan arge,” jedhan jiraataan BBCtti himan.
Jiraataan kun ”wanti hundumtuu dukkana, hundumtuu ni sodaata . Namni hundinu yeroo humna waraanaa argu akkuma bokkaatti baqata,” jedhan.
Hospitaala riifaraalaa Naqamteetti ogeessa fayyaa kan ta’an Dr. Daamxoo Gaarradoo namni tokko ajjeefamuufi tokko rasaasaan dhahamee hospitaala galuu nuuf mirkaneessaniiru.
Namni tokko eenyummaan isaa kan hin baramne rasaasaan laphee isaa irra rukutamee kan du’e yoo tahu namni Zalaalam jedhamu biraan ammoo sarbaa miila isaa mirgaa irra rukutamee hospitaala jira jedhan Dr Daamxoon.
Magaalicha keessa haala waliigalaa jiruu fi lubbuu namaa tibbana darbe ilaalchisee hoggansa magaalichaa argachuf yaallus milkaa’uu hin dandeenye.
Jiraattotni Godina Horroo Guduruu Wallagaa Magaala Shaambuu tokko tokkos kaleessa humni waraanaa dhukaasni waan banamuuf mana keessan gadhiisaa bahaa jedhamuun bakka garaagaraatti akka baqatan BBCtti himan.
Jiraataan maqaan isaa akka dhahamu hin feene tokko jiraattotni naannoo dirree Jaanmeedaa bakka waraanni buufate jiraatan doorsifamuun mana isaanii dhiisanii kaan magaaluma keessa naannoo Jaarba Safar jedhamutti baqatanii mana namootaatti qoodamuun akka bulan BBCtti himan.
Namni tokko namoota 17 simachuun mana isaa akka bulche BBCtti himuun adaadaankoo naannicha jiraataa turte illee ana bira dhuftee bultee jedhe.
Waraanni ABO magaala keessa jiraachuu waan beeknu hin qabnu arginees hin beeknu kan jedhan jiraataan kun keessumaa dargaggeessi karaarratti argamnaan ni reebama, ni hidhama jedhan.
”Paartii ABO jedhamu deeggartaniittu, karaa agarsiiftaniitu jedhaniima nu dararaa,” jiru jedhan.
Warri mana isaanii keessa jiran ammoo waan barbaade haa dhufu jedhanii taa’aniima eeggataa jiru jedhan.
‘Ji’oota ja’an darban lammileen 44,500 Sawud Arabiyaa irraa deebiyaniiru’
Bulchaan Godina Horroo Guduruu Obbo Ayyalee Dheekamaa humni waraanaa godina isaanii keessa socho’aa jiru ol’aantummaa seeraa kabachiisuuf socho’a malee jiraattota irra miidhaa dhaqqabsiisuuf miti jedhan.
Namootni dubbisne konkolaachistoota waajjiraalee mootummaa dabalatee kaanis ABO deegartu jedhamuun hidhamuu dubbatan.
Obbo Ayyaleen garuu namni kan to’atamu deeggarsa ABO waliin wal qabatee osoo hin taane yoo ol’aantummaa seeraa cabse qofaa dha jeddhanii,haalicha adda baafachuun qaba jedhan.
OMN:ዕለታዊ ዜና(DEC, 27,2018)